ITO ပစ္စည်းသည် n-type semiconductor ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်, ITO အမှုန့်ပါ ၀ င်သည်, ပစ်မှတ်, conductive paste နှင့် ITO တို့ဖြစ်ပါသည်: ပြားချပ်ချပ် display (FPD) စက်မှုလုပ်ငန်း, liquid crystal display လိုမျိုး (LCD), ပါးလွှာသော film transistor display (TFT-LCD ဖြစ်ပါတယ်), electroluminescent display (THE), ကွင်းပြင်ထုတ်လွှတ်မှုပြသမှု (FED), လျှပ်စစ်-အော်ဂဲနစ်အလင်းထုတ်လွှတ်သောပြားချပ်ချပ် display (OELD), plasma display ကို (PDP), စသည်တို့; photovoltaic စက်မှုလုပ်ငန်း, thin-film solar cell ကဲ့သို့; functional မှန်, infrared ရောင်ပြန်မှန်ကဲ့သို့, ကုလားကာနံရံမှန်ကဲ့သို့သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကာကွယ်သည့်မှန်, လေယာဉ်ပျံ, မော်တော်ယာဉ်မှမြူဆန့်ကျင်သောလေကာမှန်, mask နှင့် glass တို့ကဲ့သို့အမျိုးအစားသုံး disk များကဲ့သို့အဓိကနေရာသုံးခုရှိသည်.
၌ 2008, ITO ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှစ်စဉ်လိုအပ်ချက် 1,500 တန်ချိန်, စျေးနှုန်းမှာ ၁၀၀၀ ဒေါ်လာ/ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်, စုစုပေါင်းစျေးကွက်သည်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံခန့်ရှိသည်။.
လက်ရှိပြည်တွင်း ITO ပစ်မှတ်များအတွက် ၀ ယ်လိုအားသည်အကြောင်းဖြစ်သည် 150 တရုတ်စီးပွားရေးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်သားခွဲဝေမှုတို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာခြင်းနှင့်အတူ, ဂျပန်မှာပြားချပ်ချပ်ပြားပြားထုတ်လုပ်သူများစွာ, ထိုင်ဝမ်, နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့သည်၎င်းတို့၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းများကိုတရုတ်ပြည်မကြီးသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်. အနာဂတ်မှာ, တရုတ်ပြည်မကြီးသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး LCD ထုတ်လုပ်ရေးဌာနဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြည်တွင်း ITO အတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်လိုအားခန့်မှန်းသည် 2010 ကျော်လွန်လိမ့်မည် 500 တန်ချိန်.
ITO ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရေးအတွက်, အဓိကပေးသွင်းသူများသည်အဓိကအားဖြင့်ဂျပန်မှဖြစ်သည်. သူတို့ထဲတွင်, ဂျပန်စွမ်းအင်, ဂျပန် Mitsui သတ္တုတူးဖော်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း, နှင့် Japan Tosoh တို့ထက်ပိုမိုပါဝင်သည် 80% ITO စျေးကွက်၏အဓိကပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူများမှာ Shandong Weihai Blue Fox Special Material Development Co., လီမိတက်, Zhuzhou အရည်ကျိုအုပ်စု, Liuzhou Huaxi Group Co., လီမိတက်, နှင့်တရုတ်အမျိုးသားအရောင် (Ningxia) အရှေ့တိုင်းအုပ်စု, Ltd.. တရုတ်နိုင်ငံတွင် ITO ပစ်မှတ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၏ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်, ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်များသည်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သည်. ထုတ်ကုန်အများစုကိုအလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးဈေးကွက်များတွင်သာသုံးနိုင်သည်. ပြည်တွင်းအဆင့်မြင့် display ပြပွဲအားလုံးသည်သွင်းကုန်များအပေါ်မူတည်သည်။.
အကြို: vacuum coating နှင့် optical coating တို့အကြားကွာခြားချက်
နောက်တစ်ခု: Future development trend of ITO target